Ithegi: cision | Martech Zone
Kutheni singasokuze sikwenze oko
Omnye wabathengi bethu usothusile namhlanje, basazisa ukuba batyikitye Inkonzo yokuSasazwa kweNgcaciso yeendaba ekhuthazwa lelinye lamaqabane abo apho banokuhambisa khona ukukhutshwa kwabo kumaphephandaba angaphezu kwama-500. Ndikhawuleze ndancwina… nasi isizathu: Iinkonzo zokuSasazwa kweNgcaciso aziwubeki umxholo owukhuthazayo konke konke, ngaphandle kokuba umntu umamele ngokukhethekileyo ukukhutshwa kweendaba ezithile, bahlala bengafumaneki kwiziphumo zokukhangela. Ukusasazwa kweendaba
I-Cision yongeza ukuLinganisa ukuThengisa ukuThengisa kwiLifu labo loNxibelelwano
NgoLwesithathu, Julayi 26, 2017 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Inye into ebalulekileyo ekufuneka uyigcinile kwishishini leMartech kukuba uninzi lweenkampani zikumjikelo wokuphucula oqhubekayo wokwahlula nokukhulisa ishishini labo. Iqonga olisebenzisileyo kwiminyaka embalwa edlulileyo lisenokungabikho. I-Cision yenye yezo nkampani ukuba ndingakhange ndihlawule kakhulu njengoko kufuneka ndinayo. Ngokuqinisekileyo babeyinkokeli yesabelo sentengiso xa kufikwa kubudlelwane boluntu,
NgoLwesibini, Matshi 8, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ukwenza ubuqu kunyuse amaqondo okuguqula. Ayiyongcamango, ukusebenza ngokukuko komntu kuye kwangqinwa kuphindaphindwa. Ukuba uyingcali kwezonxibelelwano esidlangalaleni, uguquko lwakho kukukwazi kwakho ukupapasha okanye ukuphembelela ukwabelana ngebali lomthengi wakho okanye umsitho. Kusengqiqweni kuphela ukuba ukwenziwa komntu kuncedise ukuba utshintsho, ukanti iingcali ziyaqhubeka nokutshabalalisa ubudlelwane bazo (khumbula… yiyo i-R kwi-PR) kunye neenkqubo zebatch kunye ne-blast system kunye neetekhnoloji. Siye sabhala kwaye sabelana ngendlela yokufaka i